Ixabiso eliphantsi leShishini lokuShicilela uMatshini wokuTshintsha umatshini wokuThengisela abaThengisi kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- I-Screw Double Composting Turner Isetyenziselwa ukubila komgquba wezilwanyana, inkunkuma yodaka, udaka lokucoca ulwelo, intsalela, intsalela yamayeza, umququ, isarfusi kunye nezinye izinto ezilahlwayo, kwaye isetyenziselwa ukubila kwe-aerobic.
Yintoni isiQinisekisi esiQineneyo sokuTshintsha umatshini?
Isizukulwana esitsha I-Screw Double Composting Turner Umatshini Ukuphuculwa kwentshukumo ejikelezayo yokujikeleza oksi kabini, ke inento yokujika, ukuxuba kunye neoksijini, ukuphucula ukubola, ukubola ngokukhawuleza, ukuthintela ukwenziwa kwevumba, ukonga ukusetyenziswa kwamandla kokugcwaliswa kweoksijini, kunye nokunciphisa ixesha lokuvumba. Ukujula kobunzulu besixhobo kunokufikelela kwi-1.7 yeemitha kwaye isithuba esisebenzayo sokujika sinokufikelela kwiimitha ezi-6-11.
Ukusetyenziswa komatshini ojikajika kabini wokujija umatshini
(1) I-Screw Double Composting Turner Umatshini Iyasetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokuvumba kunye nokususwa kwamanzi njengezityalo zezichumiso eziphilayo, izityalo ezihlanganisiweyo zezichumisi,
(2) ilungele ngokukodwa ukuvundiswa kwezinto eziphantsi eziphilayo ezinjengodaka kunye nenkunkuma kamasipala (ngenxa yomxholo ophantsi we-organic, ubunzulu bokuvumba kufuneka bunikwe ukuphucula ubushushu bokubila, ngalo ndlela kuncitshiswe ixesha lokuvumba).
(3) Yenza unxibelelwano olwaneleyo phakathi kwezinto kunye neoksijini esemoyeni, ukuze udlale indima ebalulekileyo yokuvundisa kwe-aerobic.
Lawula amaNqaku aphambili eComposting
1. Ummiselo we-carbon-nitrogen ratio (C / N). I-C / N efanelekileyo yokubola kwezinto eziphilayo ngezinto eziphilayo ezimalunga ne-25: 1.
2. Ulawulo lwamanzi. Umxholo wamanzi womgquba kwimveliso yokwenene ulawulwa ngokubanzi kwiipesenti ezingama-50%.
3. Ukulawulwa komoya womgquba. Ukuhanjiswa kweoksijini yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yomgquba. Kukholelwa ngokubanzi ukuba ioksijini kwimfumba ilungele i-8% ~ 18%.
4. Ulawulo lobushushu. Ubushushu yinto ebalulekileyo echaphazela umsebenzi wentsholongwane. Amaqondo obushushu aphezulu aqhelekileyo aphakathi kwama-50-65 ° C.
5. Ulawulo lwe-PH. I-PH yinto ebalulekileyo echaphazela ukukhula kwamagciwane. Eyona PH iphambili kufuneka ibe ngu-6-9.
6. Ulawulo olunukayo. Okwangoku, ezinye ii-microorganisms zisetyenziselwa ukunciphisa.
Izinto eziluncedo Screw Double Composting Turner Machine
(1) Indawo yokuchola enokuqonda ukusebenza komatshini omnye onemijelo emininzi inokukhutshwa ngokuqhubekayo okanye kwiibhetshi.
(2) Ukuchaneka kokusebenza ngokukuko, ukusebenza okuzinzileyo, okuqinileyo nokuhlala ixesha elide, ukujika okufanayo.
(3) Ilungele ukubila kwe-aerobic ingasetyenziswa ngokudibeneyo namagumbi okubila elanga kunye neeshift.
I-Screw Double Composting Turner yoMboniso weVidiyo
Isikhonkwane esiBini sokuGquma uMatshini oSebenzisa uMzekelo
Ngesanti kubunzulu baphantsi Pump Motor
I-L × 9m
I-L × 15m
Egqithileyo Uhlobo lwevili lokuGaya umatshini wokujika
Okulandelayo: Nkqo Fermentation Tank